Shiinaha Shandadaha Shandadaha Shandado-saareyaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Xigasho - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Guri > Boorsooyin > Boorsada dibedda > Boorsada boorsada
1. Boorsada boorsada product introduction:
(1) Shandaddan boorsada ahi waxay ka samaysan tahay 1680D wax-soo-saarka dharka naylon ballistic-ga ah. Sababtoo ah dharku waa adag yahay, xiran yahay oo u adkeysanaya ilmada, wuu ka adkeysi badan yahay dharka caadiga ah ee nylon, dharka polyetylenka (POLYESTER) ama dharka cudbiga ah (COTTON) Darajooyinku dhowr jeer ayey ka sareeyaan! Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay taabasho jilicsan, midab dhalaalaya oo muddo dheer soconaya oo tayo sare leh, waxayna si dhakhso leh u bedeshay dhar kale oo ah dharka ugu badan ee loo isticmaalo millatariga dalal kala duwan. Labiska milatariga Mareykanka waa nooc ka mid ah dharkan oo ah mid hagaagsan. Waxaan u isticmaalnaa dharkan sida sheyga ugu weyn ee boorsada dhabarka sababtoo ah soo noqnoqoshada badan ee isticmaalka shandada shandada nolol maalmeedka. Adeegsiga maaddadan oo ah waxyaabaha ugu muhiimsan ayaa ah in boorsada ay ka dhigto mid lagu kalsoonaan karo.
(2) Si loo kala saaro shayada kala duwan si ku haboon, waxaan ugu tala galnay qaybo kala duwan boorsadan, oo waxaan ku darnay howlo kala duwan, si aad si fiican ugu isticmaali karto howlaha kala soocida boorsada xaaladaha kala duwan.
(3) Boorsadaan boorsada ah waxay kaa caawin kartaa inaad alaab badan xirxirto marka aad aadeyso masaafo dheer, sida: laptop-ka, joornaalada, dukumiintiyada, ipadka, dharka, alaabada daryeelka shakhsiga ah, dhalooyinka biyaha, dalladaha iyo waxyaabo kale.
(4) Waxaan u adeegsanaa walxaha u qaabeysan duugista shandadaha iyo boorsooyinka dhabarka, oo leh dabacsanaan sare, waxay si wax ku ool ah ugu kala firdhin kartaa awoodda garbaha, waxay yareyn kartaa cadaadiska garbaha uu sababayo culeyska, waxayna si fiican u duugi kartaa garbahaaga.
(5) Waxaa jira suumanka dhagaha iyo muraayadaha muraayadaha ee suunka, iyo boorso amaan oo ka dhan ah xatooyada ayaa lagu siiyaa dhabarka. Suunka shandada ayaa si fiican loogu isticmaali karaa shandada. Markaad ku safreyso shandad iyo shandado, waxaad ku dul sudhan kartaa shandada shandada shandada, si aad garbahaaga u nasato oo aad si fudud ugu safarto.
(6) Waxaan si taxadar leh u xulnay qalab tayo sare leh si aan u soosaarno shandadan boorsada ah, taas oo ka dhigaysa boorsada inay sii noolaato cimri dheer, xitaa haddii aad si joogto ah u isticmaasho, wax saameyn ah kuma yeelanayso haba yaraatee. Tiknoolajiyada wanaagsan ee dharka lagu tolo ayaa ka dhigeysa qaab dhismeedka boorsada shandadaha mid aad u xoogan.
(7) Waxaan ku qalabeynay shandadan boorsada ah dekedda lacag bixinta ee dibada ah, jaakada dhagaha, warqad iyo kiis qalin, laptop gudaha ah, bacda gudaha ee iPad, boorsada dharka, bacda dhalada biyaha, dalladda dalada, jillaab fure iyo hawlo kale oo badan. Boorso dhab ah oo shaqeyneysa.
2. Boorsada boorsada product parameters (specifications)
1680D ballistic nylon biyaha celis ah ballistic
Dhererka 48cmX Width 33cmX Dhererka 23cm
3. Sidee loo doortaa boorsada boorsada wanaagsan?
(1) Ugu horreyntii, waa inaan doorannaa shandad boorso ka sameysan maaddada naylon, maxaa yeelay maaddada naylonku waxay leedahay isku dheelitirnaan kacsan iyo isku dheellitir abrasion. Sidaa darteed, boorsada boorsada ee laga sameeyay naylon waa mid lagu kalsoonaan karo. Maaddada Nylon waxay leedahay dusha sare ee jilicsan iyo dhalaal wanaagsan, taas oo ka dhigaysa boorsooyinka laga sameeyay maaddada naylonka inay u muuqdaan kuwo aad u sarreeya.
(3) Boorsada shandadaha badan ee shaqeysa waxay safarkaaga ka dhigi kartaa mid aad u fudud. Dhammaan alaabooyinka waxaa loo habeeyay si habsami leh, si aysan ugu muuqan wax qasan, marin u helkuna waa habboon yahay oo dhakhso badan
(4) Boorsada boorsada ayaa ka culus, waxaana loo baahan yahay laba xarig oo garbaha lagu duugo loona yareeyo culeyska si loo xaliyo dhibaatadan. Sidaa darteed, markaad iibsaneyso boorsada boorsada, waxaad u baahan tahay inaad fiiro gaar ah u yeelatid in suunka uu leeyahay shaqadan.
5. Xirxirida iyo rarida shandadaha iyo boorsada
(2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 48cm X 33cm X 23cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si loo badbaadiyo xamuulka.
(3) faahfaahinta xirxirida: 50cm X 35m X 50cm. 10PCS / kartoonka Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab warqad jiingado qaro weyn leh.
(4) Miisaanka guud ee sanduuqa oo dhan: 13Kg.
(5) Miisaanka saafiga ah ee sanduuqa oo dhan: 12.5Kg.
(8) Haddii loo baahdo, waxaan naqshadayn doonaa baakadka shandaddan dambe si waafaqsan shuruudahaaga.
(9) Hadaad ubaahantahay shaybaarka shandadan shandada ah, waxaan dooran doonaa inaan kuugu soo dirno diyaarad.
(4) Waxaan si adag u xakameyn doonnaa tayada badeecada oo waxaan kuu soo gudbin doonaa adiga oo leh heerka dhaafitaanka 100%.
(5) Sanduuqayaga shirkadda wuxuu si joogto ah u ansax yahay oo ay maamulaan shaqaale xirfadlayaal u ah adeegga macaamiisha. Waad noo soo qori kartaa talo iyo cabasho wakhti kasta. Waxaan u aqrin doonnaa una soo jawaabi doonnaa si hufan oo taxaddar leh.
Q2. Imisa maalmood ayaa waqtiga hogaaminta wax soo saarkaagu yahay? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
Q3aad. Maxay yihiin shuruudaha lacag bixinta?
Jawaab: <= 1000USD, 100% bixinta kahor.
Q4: Ma leedahay xad MOQ ah?
Q5: Miyaad aqbashaa kormeerka dhinac saddexaad? Ma bixin kartaa warbixinno tijaabo ah? Sidee tayada wax soo saarkaagu yahay?
(3) Waxaan nahay soo saare shandadaha Disney, boorsooyinka Wal-Mart iyo wax soo saarka Samsonite. Fadlan ku kalsoonow tayada wax soo saarka.
Q6. Waa maxay waqtigaaga hogaaminta ee wax soo saar ballaaran maalmo?
Q7. Muddo intee le'eg ayey tahay waqtiga hoggaaminta wax soo saarkaaga? Miyaad bixisaa shay-baarka? Ma bilaashbaa mise waa dheeri?
Q8. Ma waxaad tahay warshad ama ganacsade?
Calaamadaha kulul: Boorsada boorsada, Shiinaha, soo saarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka